Amagobolondo nolwandle Conch
Ngiyavuma, manje ezingavamile ukuthola indoda ongenayo edonsela amafasitela, okuyinto in inqwaba ibekwe zasolwandle, amatshe, ayalolongwa kahle usawoti emanzini ingilazi izinsalela futhi coral engavamile.
Futhi mingaki nazi ekujuleni kolwandle izipho siletha njalo ngonyaka, abuye kokubili kwezilwandle futhi lendawo zokungcebeleka? Kunjalo - emakhulwini! Eqinisweni, kuye kwaba kakade uhlobo lesiko usuphumule, ukuthatha njengoba isikhumbuzo ucezu kwelinye izwe, lapho kukhona resuscitates iholidi, eziphumulele sindiso futhi abanye inkululeko ekhethekile kwangaphakathi.
Zasolwandle. ulwazi olujwayelekile
Ngokusho amagama esayensi, amagobolondo ajwayelekile (noma-molluscs) abizwa ngokuthi yangaphandle okuqinile igobolondo lomnenke ezihlukahlukene amajamo kanye wabuka. Zinikeza a ucwebezela ngendlela ekhangayo ekhethekile, ngakho iningi bayakwazi kukhanye ilanga.
Kufanele kuqashelwe ukuthi zonke okusolwandle ezindaweni ezahlukene futhi kwi kuhluke ngokuphelele kwezinye ukujula ngamunye.
Kuningi Amagobolondo ezingenalutho zingatholakala ku lolwandle, e amatheku eduze emadwaleni emanzini angajulile esihlabathini futhi ngaphansi daka. Kusukela umbono wesayensi, zasolwandle, amagama layo ebudisi ngokwanele ukukhumbula, kukhona lelimcoka ngokuya ukufunda izindlela okuzivumelanisa imvelo.
Lokhu kuye kwaba endaweni ekhethekile futhi ethembisa kakhulu isayensi, eyaziwa ngokuthi mariculture. By the way, incazelo yaleli gama ngokoqobo isiRashiya angahunyushwa ngokuthi "isiko kolwandle." Kodwa ukuqoqwa nokutadisha amagobolondo ubheke nezigaba conchology.
By the way, ingasaphathwa ukuthi namuhla ngokwemvelo, kukhona izinhlobo eziningi ukuthi asuse yazo yemvelo akuvunyelwe nakancane. Ukunganakwa inhlawulo omkhulu lingasethwa maqondana nomthetho bajeziswe kanzima futhi asuke eshaya omkawo.
Izinhlobo ezinkulu shellfish
Izakhamuzi izilwandle nasolwandle, kokuba igobolondo obukhulu, bavame ukuyibiza ngokuthi i amagobolondo, ngokuvamile awela omunye amakilasi amabili.
Gastropods, ezithinta lonke ukuma ikhoyili kumbe ikhoyili imbobo ekhoneni. Ezinye izinhlobo zawo abe isembozo elikhonza kubo uhlobo dweba yokuvala amagobolondo. igobolondo yabo kungaba Horny futhi lime.
molluscs Bivalve njengoba amanzi, esikhundleni salokho, igobolondo ezahlukene ehlanganisa izingxenye ezimbili ziyalingana. Izindawo zawo zokuhlala kungaba njengoba emanzini anosawoti noma angenawo.
Sinks usawoti emanzini olwandle, njengoba umthetho, mihle kakhulu futhi ezihlukahlukene. Ahluke umbala walo, isayizi shape. Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, nomele ezinjalo, njengoba i-starfish igobolondo. Cishe zonke Akekho kithi owazi nanokuthi libukeka kanjani lolu hlobo, kodwa ngesikhathi esifanayo, uyabona, ngisho iqoqo sakhe bahlangana singazi ngisho ukuthola amakhophi ezimbili ezifanayo ngokuphelele.
Futhi kuyiqiniso ukuthi igobolondo kwakuzwakala ingoma kolwandle?
Kusukela ebuntwaneni sonke siyazi ukuthi uma wenza noma iyiphi, ngisho nomncane itshe umnenke endlebeni ngeke bakuzwe ukuduma kolwandle. Futhi abaningi bangase baphikise ngokuthi ke akuxhomekile ezinye zasolwandle zathathwa kuphi futhi nini. Futhi namhlanje emhlabeni leli qiniso ezithakazelisayo kakhulu isivele akha eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma ambalwa.
Okokuqala, imfundiso yokuziphendukela engenabulungisa wukuthi amagobolondo kubikwa uphucwe umsindo wezilwandle nasolwandle. Nakuba kuyadabukisa ukuthi, kodwa kungcono hhayi ningi than eqanjiwe, ucingo awasekelwe yiwo ngokwesayensi.
Imfundiso yesibili ima kwelokuthi bobabili zethulwe kuncike indlebe bezwa umsindo ukugeleza kwegazi emikhunjini yabo igazi. Kodwa leli qiniso kulula kakhulu ukuba abhubhise. Ngokwesibonelo, ubona, ngemuva okukhulu umsebenzi igazi ukhiphela ngomzimba ngejubane eliphezulu kakhulu. Kulokhu, lo msindo igobolondo kufanele zishintshwe, kodwa ayenzeki.
A theory wesithathu uthi igobolondo kungenziwa ezwa umsindo umfudlana emoyeni sidlula ke. Kuba sobala ukuthi kungani umsindo kuyoba emsindweni uma igobolondo ukuletha endlebeni yakhe nababuthaka - uma uqhubeka naye emhlabeni. Lo mbono futhi waphikisa, kubalulekile kuphela ukubeka into endlini ekhethekile umakhalekhukhwini. Kulokhu, umsindo amagobolondo zinyamalale ngokuphelele, kodwa ukugeleza komoya kuwo akukashintshi.
Ngemva ukucaciseleka yakho konke lokhu kuyacaca ukuthi umsindo olwandle emagobolondweni lizwakele kuphela uma emhlabeni echibini. It kusekelwe kulesi eziyiqiniso kakhulu, imfundiso lesine.
Eqinisweni, umsindo kolwandle - ushintsho umsindo ambient ukuthi kubonakala kusukela ezindongeni amagobolondo, izinto ezinkulu ngakho wezwa ngokucace kakhudlwana. Futhi kulapho umsindo nxazonke, sobala-ke kuyozwakala igobolondo. Kule kusobala ukuthi kuyinto elula elalinembobo ekamelweni.
By the way, ukuzwa ingoma kolwandle, akudingekile ukuba abe igobolondo, singasebenza indlebe inkomishi evamile noma isandla.
Izakhamuzi ezilwandle kanye izilwandle: amaqiniso engavamile
Yiziphi? Igobolondo kuyinto skeleton sangaphandle shellfish, okuyinto kuzenza ngoba ukhona. Lapho le nhlanzi likhula, kwandisa igobolondo lakhe. Imibala incike ikhemikhali ukhululeka nezindlala, ngakho zasolwandle kungenziwa zaveza zahlukahlukene kakhulu, ezimeni njalo iningi imivimbo, emgqeni nezimagqabhagqabha. Kufanele kuqashelwe ukuthi abameleli kulencane ingabonakala kuphela ngokusebenzisa khulu, futhi ngezinye izikhathi sifinyelele osayizi emikhulu imitha.
Amaparele zivela? Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi igobolondo esikhulu kunazo zonke emhlabeni has Rapan. Lokhu nomzingeli ezinolaka unolunye ulimi abukhali umlenze eliya muscled. Yena, njengoba zonke izinhlobo ezinjalo, uyakwazi "ukwenza" amapharele. Lapho igobolondo imbaza uthola nomzimba angaphandle, uqala ngomfutho ivikele zamatshe nacre. Futhi kukhona parele eliyigugu. Lokhu Rapan siqoshwe kusuka oLwandle iPacific kuya oLwandle Olumnyama ngengozi, bese wazinza futhi washintsha semvelo kwakhiwa lapha.
Futhi ingabe sikhona uhlobo totem izingongolo? Yebo, noma kanjani. Ngokwesibonelo, cowry igobolondo Sekuyisikhathi eside eyiqiniso yophawu. Ezikhathini zasendulo yasetshenziswa esikhundleni imali, futhi abantu abaningi babheka uphawu olukhethekile ukuceba nokuchuma. Ngaphezu kwalokho, igobolondo i-scallop eside ubelokhu uhlobo talisman lezihambi. By the way, akubona bonke uyazi kude kangakanani ukuthi ezinye izinkolo ngihloniphe rapana njengoba iwuphawu ekuphileni komuntu futhi umphefumulo wakhe emhlabeni.
Amandla okwelapha zasolwandle
On kubo, ubona, ngizwile alulona olwawo wonke umuntu. Esikhathini imithi asendulo aseMpumalanga emhlabeni ukusetshenziswa wandile ka ezazilenga amagobolondo kanye rapanov ngesikhathi massage.
Kodwa kule yesimanje SPA-salon manje ukwenza ngempela ngempumelelo massage nge amagobolondo ashisayo. Kuvuselela kwegazi, ephumula imisipha futhi uthulisa isimiso sezinzwa.
Cosmetology nayo inyumbazana. Kulesi isiqondiso imikhiqizo kabanzi ukulungiswa ejenti ngempumelelo anti-ukuguga, lapho kwenye yezingxenye is ungeze igobolondo microparticle.
Igobolondo ezibizayo kakhulu emhlabeni: kuyini?
Akukho imfihlo ukuthi abantu bakhona abaningi abadumile futhi mkhulu kakhulu le planethi ukuqoqa zasolwandle, njengathi, ezulazulayo ogwini noma ulwandle beyofuna Ngokwesibonelo engavamile ikakhulukazi.
Nokho, amandla ukuthi kube ukukwenza ngokuhlukile kancane. Vele bathenge wakwazi ukuthola omunye.
Ngokuvamile, igobolondo ukubuthwa wokuzilibazisa libizwa aristocrats. Ukuze sandise amaqoqo yabo, ukuthola zezinhlobo eziyigugu zinhlobo ezahlukene, imindeni, bobunjwa nemibala. Ngokwesibonelo, eqolo emhlabeni igobolondo-CIPRO Fulton lathengiswa 37.000 zamaRandi.
Lapho zikhula ukhukhunathi? Indawo palm kakhukhunathi
I chickadee odla ehlobo nasebusika?
Indlela izindlulamithi ubuthongo (isithombe). Kanjani futhi kuphi ukulala indlulamitsi
Ubuzimu ezweni lanamuhla
Ipensela namanje ukuphila izigaba: Amathiphu saqala umculi
Isudi double breast: yemfashini ifaka Ukukhetha
Sibalo Topiary: igxathu negxathu indlela ukudala umumo. art topiary
Umlando play "I-Lower Ngokujula" Gorky
Woza (weza, woza) - Isenzo: imithetho, Izibonelo zokusetshenziswa namathebula
Tablets "Tsiprolet" - amaphilisi noma cha? "Tsiprolet": ukufundwa, ukubuyekezwa, analogs futhi side effects
Zokupheka elula inhlanzi
Kungani izinhlanzi uthula sinjalo lesi kusuke kunjalo ngempela?
Indlela enze yogurt ikhaya fat?
Exegesis - Iyini? exegesis eziseBhayibhelini
Izingane amabhuzu "Skandia": ububanzi, ukubuyekezwa